” ပုံပြောကောင်းတဲ့ ကောင်ကလေး “ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » ” ပုံပြောကောင်းတဲ့ ကောင်ကလေး “	20
” ပုံပြောကောင်းတဲ့ ကောင်ကလေး “
Posted by ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး on Jul 21, 2012 in Copy/Paste | 20 comments
နင် နည်းနည်းလေးတောင် အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးနော်…
ရိုးမယ်ဖွဲ့ခဲ့ တဲ့ စကားလုံးများစွာနဲ့…
ဆိပ်သုဉ်းမသွားအောင် နင် ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာ….
ရှောင်ပြေးသွားတာ နင်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ အချစ်တွေလား….။
နင့် ကိုယုံပါတယ်ဆိုတော့ နင်ကဥပေက္ခာတွေပဲပေးတယ်…
လွယ်လိုက်တာဟာ နင့် ပါးစပ်ဖျားကပြောခဲ့တဲ့….
“ချစ်တယ်” ဆိုတာ င့ါကိုပြောဖို့….
တာဝန်တစ်ခု အနေနဲ့ များ သတ်မှတ်ထားခဲ့သလား ချစ်သူရယ်…။
နင် င့ါကိုချစ်ခဲ့တုန်းက ရိုးသွားစွာချစ်ခဲ့လား….
နင် မချစ်တော့ဘူးဆိုရင် ရိုးသားစွာဝန်ခံစေချင်ခဲ့တာပါ…
ဝိုးတိုးဝါးတားနဲ့ မသေချာမရေရာတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို ငါမုန်းတယ်…
ငါကလည်း အသွေးအသားနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး…
ခံစားချက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ…
င့ါမှာ ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံနဲ့လေ…
ဟိုအရင်အချိန်က နင် ပြောခဲ့တဲ့ စကားသံလေးတွေ…
အခု အရင်အချိန်တွေက …
ပုံပြင်တွေလား မှတ်ယူရတော့မယ် ချစ်သူ…
ပုံပြောကောင်းတဲ့ နင့်ကလည်း ငါကြောက်မိတယ်…
ပုံပြောကောင်းတဲ့.. နင့်ကို ငါဘာဖြစ်လို့များ မမုန်းးးးးးးးမိပါလိမ့် ချစ်သူရယ်…။
(မှတ်ချက်။ ။ ပုံပြင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတော်တော်များများကို သိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်..
သီးခံပြီးတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင် )
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး has written 36 post in this blog.
View all posts by ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး →	Blog
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ပုံပြောကောင်းတဲ့ နင့်ကိုလည်း ငါကြောက်မိတာပါ..
( အဲ့နားမှာ မှားသွားလို့ )…မှားသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ…:p
snow white says: မိုက်လေးရယ် လူတိုင်းအချစ်ဒဏ်ရာတွေတော့ခံစားဖူးမယ်ထင်ပါတယ် တကယ့်ကို အချစ်ဆိုကြောက်တယ် ပုံပြောကောင်းတဲ့သူတွေကို ပိုလို့တောင်ကြောက် တယ် အချစ်မရှိရင် လူသားဖြစ်ရတာ မပျော်ရွှင်ဘူးလို့လူတော်တော်များများပြောပေမယ့် အချစ်ကစပိုင်းဘဲချစ်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ် နောက်ပိုင်းလမ်းခွဲ ပြတ်ဆဲသွားရင် ရင်ထဲမှာဒဏ်ရာတွေသာကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် ။။။
သန်းထွဋ်ဦး says: မိုက်လေးရေ အားပေးသွားတယ်နော်။
ko khin kha says: အဖိုးကလည်းအဖွားကို ချစ်တယ်ပြောမှာဘဲ
အဖေကလည်းအမေ့ကို ချစ်တယ် ချစ်တယ်တဲ့
ကျွန်တော်ကလည်းသူကို ပြောပါတယ် ချစ်တယ်။
ညလေး says: မိုက်လေးရယ်..နာမည်နဲ.လိုက်အောင်တော်တော်မိုက်မိုက်လေးတွေရေးတတ်ပါပေ့……
“နင် င့ါကိုချစ်ခဲ့တုန်းက ရိုးသွားစွာချစ်ခဲ့လား….
နင် မချစ်တော့ဘူးဆိုရင် ရိုးသားစွာဝန်ခံစေချင်ခဲ့တာပါ…”ဒီစကားလုံးလေးကတော့……
အလင်းဆက် says: တားက တော့ ..ပုံပြောမကောင်းဘူး.။ အဟိ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အော် ..
ဝိုင်ဝိုင်းရဲ့ သီချင်းကို ကြားဖူးသလားကွယ် ..
“မင်းမျက်ရည် .. မင်းမျက်ရည်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးလေ ..
အဲ့ဒီသီချင်းထဲက ဘေးနားမှာ သာနေတဲ့ လဟာ ကိုယ်ပါပဲကွယ် ..
မိုက်လေးရဲ့ ဘေးနားမှာပေါ့ .. အဟိ .. :D
(ဟိုလူဂျီး မလာခင် ကြိုကစ်ထားတာ .. )
မောင်ပေ says: အော် မိုက်လေးရယ်
ဘဲရှုပ် says: ချစ်သူမဟုတ်တဲ့ရည်းစားသဘောက
ခွင့်လွှတ်ပါ…….. ကိုယ် မင်းအချစ်နဲ့ မတန်ပါဘူး……
ဖိုးထောင် says: ခေါင်း……လောင်း………သံ…. တညံညံပေး…………..တဲ့ ………….
ကိုပေ ပုဆိုးဝတ်တဲ့နေ့တွေ……………ပြေးမြင်..မိရင်……….. ကောင်းလိုက်တဲ့ တွံတေးသိန်းတန်သီချင်း
cherry nwe says: ညလေးတော့ခံစားဘူးသေးဘူး
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ညလေ .. အဲ .. ချယ်လေး ..
ချယ်လေးဂို အဲ့လို မခံစားရအောင်လို့လည်း
တိုဂ အဂျစ်ဂျီး ဂျစ်ခဲ့ဒါဘော့လို့ .. :D
မှတ်ချက် ။ ။ နောက်ဒါဘာ ..
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: မိုက်လေး ဒီတစ်ခါရေးတာတွေမှာ…
နောက်ပြီး ရေးလိုက်တာ အလျှင်စလိုနဲ့မို့…
ဒါပေမယ့် အခုလို သီးခံဖတ်ပေးသွားတဲ့…
mamanoyar says: မိုက်မိုက်ရေ အားပေးသွားတယ်နော်
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: အင်း…..ဟုတ်ယ်နော်…
ရေးသမျှတွေက အလွမ်းနဲ့အချစ်ပဲများနေတယ်…
ကျန်တာကျတော့လည်း မိုက်လေး ရေးတတ်ဘူးလေ…
ဘုဂလန့်် says: သောက်ကျိုးနဲ မိုက်လိုက်တဲ့စာသား ကော်ပီကူးထားတဲ့အတိုင်းဘဲ
မောင်ပေ says: မျက်ရည်တွေ ထပ်ပြီးတောက်တောက်ကျမိတယ်
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: အဲ…ဘုဂလန့်…
(မှတ်ချက်။ ။ထဲမှာလည်း ပါတယ်လေဗျာ ပုံပြင်ဆိုတဲ့ စာသားကိုတော့ ကြားဖူးကြလိမ့်မယ်လို့…
Naing Ngan Kyaw says: ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်မလေး……….
မင်းရဲ့ ပို့စ်ကို ပထမဦးဆုံးပဲ Comment ပေးဖူးတာပါ
ပထမဦးဆုံးပဲ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ကဗျာလေးက အံသြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို …………
အဲဒီအတွက် ကိုယ့်ခံစားမှုတွေကို ရေးပေးနေသလားတောင်အောက်မေ့မိတယ်…………..
ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါလို့………
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်…။
Comments By Postလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - Mr. MarGa - may julyနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၆) - Mr. MarGa - စနေဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - kyeemite - padonmarအတု - ကြက်အူလှည့် - Nyo Winသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - kyeemite - Foreign Residentရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ ပြည်မြန်မာ - Mr. MarGa - padonmarမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Mr. MarGa - khin phoneစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - kyeemite - ဆူးလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - နွေဦး - ဆူးFloral Gift - Macro Series - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - kyeemite - padonmarမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Nyo Win - kyeemiteစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - Foreign Residentစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - Foreign Resident - Foreign Residentသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - naywoon niကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - padonmar - ခင်ခဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - kai - ဦးဦးပါလေရာခရီးသည်လေးသို့ - nway kyu - marblecommet“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - uncle gyi - padonmarစည်တော်ကြီး - ko pauk mandalay - ဦးဦးပါလေရာပုညကြိယာဆယ်ပါး - kyaw hteik - padonmarနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - uncle gyi - BMTM Mdy``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - padonmar - BMTM MdyEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67481 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59505 Kyats )MaMa (58061 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...